NBA-da Mareykanka oo loo hakiyay toogashadiI Jacob Blake - Tilmaan Media
NBA-da Mareykanka oo loo hakiyay toogashadiI Jacob Blake
Dhammaan ciyaarihii kala sooca ahaa ee kubadda koleyga Mareykanka ee loo yaqaano NBA ayaa la hakiyay, sababo la xiriira caddaalad darrada isirka ku saleysan ee Mareykanka.
Ciyaaraha la hakiyay ayaa waxaa ka mid ah kuwo dhexmari lahaa Milwaukee iyo Orlando, Houston iyo Oklahoma City, iyo the Los Angeles Lakers vs Portland. Guddiga ciyaaraha NBA ayaa sheegay in kulamadaasi dib laga ciyaari doonno, laakin wali lama cayimin xilliga.
Ciyaartooyda kubbada koleyga Mareykanka ayaa sheegay in ay qaadaceen ciyaaraha, si ay u diraan farriin ku aadan caddaalad darrada dhanka isirka ah ee ay dadka madow ay inta badan kala kulmaan qeybo ka mid ah booliska.
Dhacdadii ugu danbeysay ayaa aheyd tii uu askari Mareykan ah dhaawac halis ah ugu geystay todobaadkan, Jacob Blake oo ah nin ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka degenna gobolka Wisconsin.
Toogashada Blake ayaa mar kale kicisay bannaanbaxyada dadka u dhaq dhaqaaqa xuquuqda madowga Mareykanka. Waxaana habeenkii saddexaad uu bandow saaranyahay magaalada Kenosha oo ah halka lagu dhaawacay Blake.
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo gaaray Dhuusamareeb
New Zealand: Xabsi daaim lagu riday ninkii dad Muslimiinta ah laayay